समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो जेठभित्रै सम्बोधन गरिने ! – Public Health Concern(PHC)
in स्वास्थ्यमा अहिले
काठमाण्डाै – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउनेको गुनासो यही महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भएको छ । समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका करिब १३ हजार कर्मचारीको गुनासोलाई यही महिनाभित्र सम्बोधन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गएको चैतमा सङ्घमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ तथा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजन गरेका कर्मचारीले आफूलाई ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५’ अनुसार समायोजन नगरिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ स्थापना गरी निवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फको छुट्टाछुट्टै कक्ष स्थापना गरी गुनासो सङ्कलन गरेको थियो ।
“स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको समायोजन गरिए पनि गुनासो आएकाले पत्र दिएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चाँडै नै गुनासोलाई सम्बोधन गरी पत्र दिइनेछ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा समूहको पनि विज्ञापन गरिनेछ ।” लोकसेवा आयोगले गत माघ १५ गते स्थानीय तहको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन गरे पनि स्वास्थ्य सेवा समूहको भने विज्ञापन गरेको छैन । श्रोत
Tags: health infopublic health updatesamayojanSamayojan UpdateSwaasthya Samaayojan
अब क्षयरोगिको खकार ड्रोनमा ! नेपालकै पहिलो मेडिकल ड्रोन क्षयरोग कार्यक्रममा !